एडियन बने स्नूकर च्याम्पियन
भरतपुर, २९ चैत । नारायणगढमा भएको जिल्लास्तरीय स्नूकर प्रतियोगिताको उपाधि नारायणगढका एडियन गुरुङले जितेका छन् ।
सोमबार भएको फाइनल भिडन्तमा उनले नारायणगढ बेलटाँडीका रोशन खड्कालाई पराजित गरी उपाधि जितेका हुन् । बेस्ट अफ ११ मा खेलाइएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा एडियनले रोशनलाई ६–२ ले पराजित गरे । बुलेट स्नूकर क्लबले पहिलोपटक आयोजना गरेको न्यू इयर स्नूकर च्याम्पियनसीपमा सहभागी ५२ जनामध्ये विभिन्न चरणमा अपराजित रहँदै गुरुङ जिल्ला च्याम्पियन बनेका हुन् ।
विजेता गुरुङले ४० हजार नगद पुरस्कारको साथमा ट्रफी उचाले भने रनर अप खड्काले २० हजार नगद र ट्रफी हात पारे । एडियन प्रतियोगिताभर ४३ को उच्च ब्रेक पनि गर्न सफल भए । जसवापत उनले थप ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । विजेता गुरुङ र उपविजेता खड्कालाई नेपाल स्नूकर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय च्याम्पियन सरोज मुल्मीले पुरस्कार वितरण गरे ।
कार्यक्रममा व्यवसायी केशव महर्जन र मानदेव अधिकारीले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । चितवन च्याम्पियनसीप विजेताले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने बुलेट स्नूकर क्लबका सञ्चालक मनोज घिमिरेले जानकारी दिए ।
बिक्रमबाबा जानेसँग दोब्बर भाडा
चितवन, २७ चैत । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा लाग्ने विक्रम बाबा मेलाको अवसर पारेर यातायात व्यवसायीले मनपरी भाडा असुल्ने गरेका छन् । यात्रुहरुको चापको फाईदा उठाउँदै व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले तोकेभन्दा बढी गाडी भाडा लिने गरेका हुन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार नारायणगढदेखि जगतपुरसम्मको भाडा ४१ रुपैयाँ हो । तर यातायात व्यवसायीहरुले ८० रुपैयाँ भाडा लिने गरेका छन् ।
चितवन, २७ चैत । वाईएसीडी मगनी र मृगौला समाज चितवनको आयोजनामा शनिबार पर्साको मगनीचोकमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिबिर तथा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नववर्ष २०७४ सालको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा ५१ जनाले रक्तदान गरेका थिए । यस्तै निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा तीन सय १६ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए ।
मृगौला समाज चितवनकी अध्यक्ष पबित्रा जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख बिजयकुमार झा, जिल्ला रेडक्रस सोसाईटीकी कोषाध्यक्ष अनिता मैनाली, सुनखानी ब्यारेकका सेनानी नारायण रायमाझी, खैरहनी उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणराज श्रेष्ठ, रेडक्रस सोसाइटी पर्साका अध्यक्ष सानकाजी पाण्डे, मगनी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष लेखबहादुर पुन लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
चितवन, २७ चैत । सूर्योदय बचत कोष भरतपुर–४ को साधारणसभा तथा अधिवेशन शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
कोषका अध्यक्ष तिलाराम सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको साधारणसभाले टीकाराम सापकोटाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमितिको गठन भएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा शिवप्रसाद बराल, सचिव महेश्वर पोखरेल, कोषाध्यक्ष हरिहर खराल रहेका छन् ।
यस्तै समितिको ऋण सुपरीवेक्षण समितिको संयोजकमा इश्वरी कडेंल, ऋण उपसमितिको संयोजकमा गोविन्द कँडेल रहेका छन् ।
साधारणसभामा कोषका सचिव शिवप्रसाद बरालले प्रगती प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष हरिहर खरालले आर्थिक प्रतिवेदन, अध्यक्ष तिलाराम सापकोटाले भावी प्रस्तावहरु र लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक इश्वरी कँडेलले लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन राखेका थिए ।
साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा उपाध्यक्ष टीकाराम सापकोटा, पूर्व अध्यक्ष खडानन्द कँडेल, निर्वाचन समितिका संयोजक रामचन्द्र ढकाललगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
काँग्रेसमा मेयरका आकांक्षी धेरै
नारायणगढ, २७ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखका लागि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट २२ जनाले इच्छा देखाएका छन् ।
कांग्रेस भरतपुर नगर समन्वय समितिले शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानगरको प्रमुखका लागि २२ जनाले निवेदन दिएका हुन् ।
यसपाली महानगर बनेको भरतपुरमा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको पत्र र जिल्ला समितिको निर्णयानुसार महानगरमा प्रमुख बन्न इच्छुकहरुको निवेदन माग गरिएको थियो । आकांक्षीलाई निवेदन दिनका लागि दुई दिनको समय तोकिएको पार्टी सभापति जितनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै उपप्रमुख पदका लागि १० जनाको निवेदन परेको छ । उम्मेदवारहरु बीच छलफल गराउँदै क्षेत्र र जिल्लामा पेस गरिने महानगर सभापति भरत अधिकारीले बताए । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखका लागि प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरे, शंकर कँडेल, डा. ईश्वरीराज लौडारी, राजेन्द्र डोटेल, उद्धव लोहनी, ऋषिराज पाण्डे, बेलबहादुर गुरुङ, मिलनबाबु श्रेष्ठ, केशवराज कँडेल, विजय भुसाल, टेकप्रसाद गुरुङ, जगनाथ पौडेल, कैलाश कोइराला, महेन्द्र श्रेष्ठ, टीकाराम न्यौपाने, उत्तम जोशी, दीर्घमान श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, बलराम पौडेल, सुबोध प्रधान, दिनेश कोइराला र भरत गुरुङले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
यसैगरी उपप्रमुखका लागि निवेदन दर्ता गराउनेमा बिनु रायमाझी, सरिता केसी, पार्वती शाह, गीता गुरुङ, इन्दिरा कुमारी सडौला, शान्ति परियार, रामकुमार श्रेष्ठ, भृकुटी पौडेल, पार्वती न्यौपाने र रेखा पोखरेल रहेका छन् ।
डेजी र वाल्मीकि फाइनलमा भिड्ने
चितवन, २७ चैत । भरतपुरमा जारी तेस्रो अन्तर विद्यालय फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा वाल्मीकि शिक्षा सदन भरतपुर र डेजी स्कूल पर्साले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । शनिबार भएको सेमीफाइनल जितेर यी दुईले उपाधि भिडन्त पक्का गरेका हुन् ।
विद्यालय फुटबल संघ चितवनले आयोजना गरेको जिल्लास्तरीय प्रतियोगितामा कूल ३२ वटा टिम सहभागी थिए । जसमध्ये शनिबारको सेमीफाइनलमा डेजीले नारायणगढको बालकुमारी ईङ्लीस स्कूल र वाल्मीकिले स्टेपबाई स्टेप ईङ्लीस स्कूललाई पराजित गरेका हुन् ।
आइतबार हुने फाइनलको विजेता र उपविजेताले नगदसँगै ट्रफी पाउने आयोजक विद्यालय फुटबल संघका अध्यक्ष धनप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
बालबालिकालाई मण्टेश्वरी शिक्षा, खेल्दै सिक्दै
‘घरमा खेलेर बस्नुभन्दा मण्टेश्वरीमा गए थोरै भएपनि बाबुनानीले पढ्छन् र सिक्छन्’ भरतपुरकी रजनी घिमिरेले भनिन् । साना बालबालिकालाई एकै पटक स्कुलमा पढ्न पठाउनुभन्दा सुरुमा मण्टेश्वरी लैजादा राम्रो हुन्छ । खेल्छन्, सिक्छन्, त्यही खान्छन् निदाउँछन् । काममा व्यस्त हुने अभिभावकलाई पनि सजिलो हुने उनले बताइन् ।
पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको लागि अहिले पूर्व स्कूलको कक्षा मण्टेश्वरीको आकर्षण बढेको छ । बालबालिकाको उमेर वानी अनुसार उनीहरुकै रुचिमा रहेर सिकाइने माध्यम मण्टेश्वरी हो । दुइ वर्ष छ महिना उमेर कटेका र सो भन्दा साना उमेर भएका बालबालिकालाई मण्टेश्वरीमा राख्ने गरिएको छ । आमावुवा कामको सिलसिलामा व्यस्त हुने, उनीहरुलाई घरमा हेर्ने मानिसको अभाव हुने, घरमा खेलेर बस्नुभन्दा सानै उमेरदेखि पढ्ने लेख्ने बानीको विकास हुने भन्दै मण्टेश्वरी लैजानेहरुको संख्या बढेर गएको छ ।
विद्यालय तहको अध्ययन सुरु हुनु भन्दा पहिला नै उनीहरुलाई सिकाइने पठन पाठन र अतिरिक्त क्रियाकलापले विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुलाई सहज हुने बुझाइ छ । मण्टेश्वरीमा अध्ययन गरेका बालबालिकामा सिकाइको स्तर पनि माथि हुने अभिभावकको भनाइ छ । ‘मण्टेश्वरी नगएका र त्यहाँ गएर पढेका बालकालिकाको चेतनाको स्तरमा फरक पाएँ’ भरतपुर–८ गौरिगञ्जकी मन्दिरा सुवेदीले भनिन् । ‘मेरो आफन्त छिमेकमा देखेको छु, सुरुमा विद्यालय पठाएकोभन्दा मण्टेश्वरीमा पठाएको बालबालिकाको सिकाइमा भिन्नता हुने रहेछ’ उनले भनिन् ‘म पनि शिक्षक हुँ तर पनि मण्टेश्वरी अहिलेको आवश्यकता भएको छ’ ।
हिजोआज चाहेर नचाहेर पनि बालबालिकालाई मण्टेश्वरीमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जन भएको छ । प्रायः सबै निजी विद्यालयहरुमा पूर्व प्राविको रुपमा शिशु कक्षा सञ्चालन गरिएको हुन्छ । त्यहाँ पनि स–साना बालबालिकालाई छुट्टै राखेर सिकाउने गरिन्छ तर त्यसको तुलनामा मण्टेश्वरीमा अलग विधि र प्रकृयाले बालबालिकालाई सिकाउने गरिन्छ । त्यसैले अभिभावकहरु बाध्य भएर आफ्ना बालबालिकालाई मण्टेश्वरीमा पठाउँछन् । ‘म दिउसो विद्यालय गएपनि घरमा बच्चा हेर्ने व्यक्तिको समस्या छैन’ उनले भनिन् ‘यो उमेर बच्चाको सिक्ने बेला हो, घरमा खेलेर बिताउनु भन्दा मण्टेश्वरी पठाउँदा केही नयाँ कुरा सिक्छन्, त्यसैले उसलाई विद्यालय पठाएको छु ।’ उनले मात्र होइन, अलिकति खर्च गर्नसक्ने अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरुलाई सानैमा मण्टेश्वरीमा पठाउने गरेका छन् ।
विद्यालय जानु पूर्व मण्टेश्वरीमा अध्ययन गराउँदा उनीको सिकाइको स्तर बढेर जाने मण्टेश्वरी सञ्चालकहरु बताउँछन् । ‘बालबालिकाको रुचि अनुसार खेल्दै सिकाउने भएकाले पढाई पनि उनीहरुलाई बोझको महसुस हँुदैन’ भरतपुर १२ मुनालचोकको किड्स वल्र्ड मण्टेश्वरीका सञ्चालिका सञ्जु आचार्यले भनिन् । ‘साना कलिला बालबालिका हुने भएकाले उनीहरुलाई म पढ्दै छु भन्ने मनमा नराखी सिकाउनु पर्दछ’ उनले भनिन् ‘गीतको माध्यमबाट, खेलौनाको माध्यमबाट उनीहरुलाई सिकाइने गरिन्छ’ ।
‘विद्यालयमा पनि बालबालिकालाई पढाइन्छ तर मण्टेश्वरीको विधि अनुसार हँुदैन, पहिला नै अक्षराम्भ गराउँदा उनीहरुलाई धेरै भार हुन्छ’ उनले भनिन् ‘त्यसैले खेलौनाको माध्यम, चित्रको माध्यम, गीतमार्फत सिकाइने गरिन्छ’ । उनले मन्टेश्वरीमा पढाउनेमात्र नगरी बालबालिकालाई बोल्ने कला, भाषाशैली, व्यवहार, अध्ययनको अलवा नृत्य, चित्रकला, अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि सहभागी गराउने गरिन्छ । बालबालिकालाई समूहमा कसरी बोल्ने, आफूभन्दा ठूलालाई आदर सत्कार गर्ने जस्ता व्यवहार पनि सिकाउने गरिने उनले बताइन् ।
मण्टेश्वरीमा पठाउनु पर्छ भन्ने अभिभावकको संख्या बढेर गएको एक मण्टेश्वरीका सञ्चालक तथा अभिभावक निरु खतिवडाले बताइन् । ‘अहिले टोलटोलमा मण्टेश्वरी खुलेका छन्, सबै एकैनाशको हुँदैनन्, र कुनचाँहीमा आफ्ना बाबुनानी पढ्न पठाउने भन्ने छनौट अभिभावकले राम्रोसँग गर्नु पर्दछ’ उनले भनिन् ‘आकर्षक विज्ञापन देखाएको भरमा होइन, त्यहाँ गरिने व्यवहार, शिक्षाको गुणस्तर, सिकाउने कलालाई ध्यान दिइने विद्यालय छान्दा लगानी खेर जाँदैन’ ।
कतिपय अभिभावकले मण्टेश्वरी स्कूलमा लिइने शुल्कलाई हेरेर आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्ने नगर्ने निर्णय गर्दछन् । त्यहाँ धेरै समय बालबालिका बस्ने र त्यही खानासमेत खुवाउने गरिन्छ । त्यहाँको खानाको गुणस्तर, खाने सामग्री, स्याहार्ने व्यक्ति, पढाउने शिक्षिका, खेलौना, प्रसस्त खेल्ने स्थान, उनीहरुले गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापको बारेमा पनि जानकारी लिनु जरुरी छ ।
साना बालबालिकाको चाहना अनुसार सिकाउनु पर्ने भएकाले धेरै बिचार पु¥याएर पढाउनु पर्ने भरतपुर १० मा रहेको लोटस मण्टेश्वरीका पवित्रा न्यौपानेले भनिन् । हामीले बालबालिकाको आफ्नै अभिभावक जस्तो गरी यहाँ सिकाउछौ । ‘उनीहरुको रुचि अनुसार उनीहरु जस्तै साना भएर सिकाउनु पर्ने हुन्छ, अवस्था अनुसार हास्ने रुने र खेल्ने गर्नु पर्दछ’ उनले भनिन् ‘बालबालिकासँगै डुबेर सिकायौ भने छिटो सिक्छन्, जर्बजस्ती गर्नु हुँदैन, खैल्दै सिक्दै गर्ने विधिनै मण्टेश्वरीको विशेषता हो’ ।
आफ्ना सन्तानको शैक्षिकस्तर राम्रो भएको देख्ने अभिभावकको मण्टेश्वरीप्रति आकर्षण बढेको आफूले पाएको सामाजिक अभियन्ता मिना खरेल बताउँछिन् । ‘राम्रो शिक्षा दिनको लागि अभिभावकहरु चाहन्छन्’ उनले भनिन् ‘त्यो शिक्षा कहाँ पाइन्छ भन्ने खोजीमा छन् ।’ आफ्ना सन्तानको पढाइ सुरु गर्ने उमेरदेखि उच्च शिक्षाको लागि छनौट गर्ने सँस्थासम्म ध्यान पु¥याउछन् । खरेलले भनिन् ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका मण्टेश्वरीहरुले राम्रोशिक्षा दिएका छन्’ ।
मण्टेश्वरीमा पढेका बालबालिकामा अतिरिक्त क्रियाकलाप, शिक्षाको स्तरमा सुधार आएकाले आफूलाई खुसी लागेको उनी बताउँछिन् । अभिभावक भएका बालबालिकाले राम्रो शैक्षिक संस्था छनौट गर्ने गरेपनि अभिभावक नभएका बालबालिकाको लागि पनि शिक्षाको ज्योति आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यस्ता अनाथ बालबालिकालाई पनि राम्रो शिक्षा दिनु जरुरी छ’ उनले भनिन् ‘अहिले खुलेको मन्टेश्वरीहरुले नाफामात्र नहेरी अनाथहरुलाई स्थान दिन जरुरी हुन्छ’ ।
एकपछि अर्को गर्दै शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगतीहरु आएकाले समय अनुसारको शैक्षिक संस्था छनौट गरेर आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिनुपर्ने प्याब्सन चितवनका पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ खनालले बताए । ‘निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको छुट्टै महत्व छ’ उनले भने ‘साना बालबालिकाहरुलाई अध्ययन गराउने मन्टेश्वरीहरुले भोलीको लागि योग्य नागरिक बनाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन्’ । जिल्लामा धेरै किसिमका मन्टेश्वरी खुलेका छन् आफ्नो सन्तान कस्तोमा राख्ने हो छान्ने अधिकार अभिभावकमा निहित रहने उनले बताए ।
साना बालबालिका भोलीका कर्णधार हुन् । विकसित समाजमा समय अनुसारको शैक्षिक गुणस्तर नभए जीवनचर्या गुजार्न समस्या पर्दछ । आफ्ना बालबालिकालाई कस्तो शिक्षा दिने, कस्तो सस्कार सिकाउने, अतिरिक्त क्रियाकलापमा कस्तो दख्खल राख्ने बनाउने भन्ने निर्णय आफैले गर्नु पर्दछ । गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको कामना ।
फाइनलमा एडियन र रोशन भिड्ने
चितवन, २७ चैत । नारायणगढमा जारी न्यू इयर स्नूकर च्याम्पियनसीपको फाइनलमा उपाधिका लागि नारायणगढ बेलटाँडीका रोशन खड्का र नारायणगढकै एडियन गुरुङ भिड्ने भएका छन् ।
शुक्रबार भएको सेमीफाइनलमा जित निकाल्दै खड्का र गुरुङले फाइनल यात्रा तय गरेका हुन् । रोशनले सेमीफाइनलमा टाँडीका गोर्किसिंह ठकुरीलाई र एडियनले नारायणगढका रञ्जित शाहलाई हराएका हुन् । सोमबारको फाइनल जित्नेले नगद ४० हजार रुपैयाँ जित्नेछन् भने उपविजेता बन्नेले २० हजार नगद पुरस्कार पाउने आयोजक बुलेट स्नूकर क्लबका सञ्चालक मनोज घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा चितवन र आसपासका ५२ जना खेलाडी सहभागी थिए । जिल्लास्तरको यो प्रतियोगिता जित्नेले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने घिमिरेले जानकारी दिए ।
हजार दिनपछि गैंडा मारियो
नारायणगढ, २७ चैत । तीन वर्षपछि शुक्रबार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सिंगे गैंडालाई चोरी शिकारीले मारेको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सुचना अधिकारी तथा सहायक संरक्षण अधिकृत नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार शनिबार खाग नभएको अवस्थामा एउटा भाले गैंडा मृत फेला परेको छ ।
निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने जगतपुरको बेलहट्टी हरियाली सामुदायिक वनमा चोरी शिकारीले मारेको अवस्थामा गैंडा फेला परेको अर्यालले जानकारी दिए । घटनास्थल निकुञ्ज मुख्यालय कसराबाट लगभग तीन किलो मिटर पश्चिममा पर्दछ ।
चितवनबाट शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा गैंडा स्थानान्तरणको प्रक्रिया चलिरहेका बेला यहाँ गैंडा मारिएको हो । सबै संरक्षणकर्मीहरु गैंडा स्थानान्तरण कार्यमा व्यस्त भएको मौका छोपेर तस्करले चोरी शिकार गरेका हुन् ।
विसं २०७१ साल बैशाख २० देखि चितवनमा चोरीशिकारबाट गैंडा मारिएको थिएन । यसअघि ७१ साल वैशाख २० मा पनि सोही क्षेत्रमा नै तस्करहरुले गैंडा मारेका थिए ।